माछा को पौडिनुहोस् थैली: वर्णन, समारोह
माछा को शरीर एकदम जटिल र Multifunctional छ। प्रदर्शन र स्थिरता को मर्मतका संग पानी पौडी manipulations रहन क्षमता शरीर को विशेष संरचना कारण छ। पनि धेरै पानी बासिन्दाहरू buoyancy र स्थिरता प्रदान गर्न अनुमति दिने, महत्वपूर्ण भागहरु प्रदान शरीर मा मानव अंगहरु लागि सामान्य बाहेक। यस सन्दर्भमा आवश्यक भएको आन्द्रा को एक निरंतरता छ जो पौडनु थैली, छ। धेरै वैज्ञानिकहरू अनुसार, शरीर मानव फोक्सोमा एक precursor रूपमा देख्न सकिन्छ। तर माछा मात्र शेष समारोह एक प्रकारको सीमित छैन जो आफ्नो प्राथमिक कार्य, कार्य गर्दछ।
को पौडनु थैली को गठन
बबल को विकास foregut देखि, जीव गर्न थाल्छ। सबैभन्दा अलवण माछा जीवन भर यो शरीर राख्ने। बुलबुले मा लार्वा को रिलीज को समयमा अझै कुनै ग्याँस संरचना तलना। यसको भर्ने भुट्नु लागि हावा सतह गर्न आउँछ र एक्लै आवश्यक मिश्रण कब्जा। चरण मा भ्रूण विकास swimbladder पृष्ठीय मेरुदण्ड को outgrowth रूपमा गठन अन्तर्गत भण्डारण। त्यसपछि, यो esophagus यस भाग जडान कि च्यानल, गायब। तर यो सबै व्यक्तिहरूलाई छैन। उपस्थिति र यस च्यानलको अभाव आधारमा माछा र zakryto- physostomous विभाजित छन्। पहिलो परिदृश्य मा, हावा वाहिनी को overgrowth र ग्याँसहरु बबल को भित्र पर्खालहरु मा रगत capillaries मार्फत vented छन्। physostomous माछा यो शरीर हावा वाहिनी मार्फत आन्द्रा संग जोडिएको छ, र जो त्यहाँ ग्याँस हटाउने छ।
ग्याँस भरिएको थैली
ग्याँस दबाव थैली क्यान्सर अटल छ। विशेष तिनीहरूले यो सक्रिय रातो शरीर गठन बाक्लो केशिका नेटवर्क कम, आवश्यक भएमा, सुधार गर्न मदत। physostomous माछा मा दबाव को पङ्क्तिबद्ध zakrytopuzyrnyh प्रजाति भन्दा ढिलो भएकोले, तिनीहरूले चाँडै पानी को गहिराइमा देखि उठ्नेछ गर्न सक्नुहुन्छ। पौडी थैली मुख बाट protrudes रूपमा माछा माझिहरु दोस्रो प्रकार पक्रने गर्दा कहिलेकाहीं अवलोकन छन्। यो कन्टेनर तल देखि सतह गर्न तीव्र वृद्धि संग देखावटी छ भन्ने तथ्यलाई कारण छ। यी माछा, विशेष, अड्डा, को अड्डा र sticklebacks श्रेय गर्न सकिन्छ। कि तल लाइभ केही शिकारीहरु निकै बबल कम छ।
माछा बबल एक Multifunctional शरीर छ, तर यसको मुख्य कार्य पानी अन्तर्गत विभिन्न अवस्थामा स्थिर छ। यो hydrostatic प्रकृति, जो, प्रसंगवश, यस्तो बबल छैन कि माछा को उदाहरण द्वारा पुष्टि जो शरीर, अन्य भागहरु लागि स्थानापन्न हुन सक्छ को एक समारोह छ। जे भए पनि, मदत माछा को मुख्य कार्य शरीर द्वारा विस्थापित पानी वजन व्यक्तिगत को आम गर्न पत्राचार जहाँ, केही गहिराइमा मा बाँकी छन्। अभ्यास मा, hydrostatic समारोह रूपमा देखा पर्न सक्छ निम्नानुसार: सक्रिय शरीर को विसर्जन को क्षण मा बबल साथ सँगै संकुचित छ, र चढाई गर्दा त्यसको विपरीत, सोझो छ। जनसंचार विस्थापित मात्रा घट्छ dipping र प्रक्रिया माछा को वजन कम हुन्छ। त्यसैले माछा धेरै कठिनाई बिना ड्रप डाउन गर्न सक्नुहुन्छ। को को गोता कम, उच्च दबाव शक्ति र थप संकुचित शरीर। उल्टो प्रक्रियाहरु चढाई को क्षण मा उत्पन्न - ग्याँस एक facilitated ठूलो परिणामस्वरूप, विस्तार र माछा सजिलै rises।
यो शरीर प्रेरित hydrostatic समारोह, र केही तरिका मा एक श्रवण साथ। यो संग, माछा हल्ला र कम्पन लहर बुझ्ने सक्छ। यो क्षमता संग एक श्रेणी मा आक्षेप र Catfish समावेश - तर यो क्षमता सबै प्रकार छैन। तर ध्वनि को धारणा नै कुनै पौडनु थैली र शरीर को एक सम्पूर्ण समूह पर्छ जो प्रदान गर्दछ। विशेष मांसपेशीमा उदाहरणका लागि, कंपन बबल पर्खालहरु, जो कम्पन sensations गराउँछ ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ। यो उल्लेखनीय छ कि बबल, पूर्ण अनुपस्थित hydrostatics यस्तो छ, तर ध्वनि को धारणा को संभावना कायम केही प्रजाति मा। यो पानी अन्तर्गत नै स्तर मा आफ्नो जीवन को सबै भन्दा खर्च भनेर benthic माछा गर्न मुख्य रूप लागू हुन्छ।
खतरा को minnows क्षणमा, उदाहरणका लागि, थैली बाट ग्याँस जारी हुन सक्छ र विशिष्ट ध्वनि आफ्नो congeners distinguishable उत्पादन। हामी ध्वनि गठन आदिम छ र पानी संसारको अन्य बासिन्दाहरूले बुझे गर्न सकिन्छ भनेर सोच्न हुँदैन। Gorby राम्रो माझिहरु गुनगुनाहट र ध्वनि घुरेको ज्ञात। यसबाहेक, माछा gurnard को पौडनु थैली उपलब्ध, शाब्दिक अमेरिकी पनडुब्बी जहाजहरू को आदेश युद्ध समयमा आत्तिनुपर्ने - त्यसैले expressive बनाउन सुनिन्छ थिए। सामान्यतया यी लक्षण स्नायु overstrain माछा को क्षणमा आउँदैन। एक hydrostatic थैली समारोह सञ्चालनको मामला मा बाह्य दबाब प्रभाव अन्तर्गत हुन्छ र त्यसपछि ध्वनि गठन केवल माछा गठन विशेष सुरक्षा संकेत रूपमा हुन्छ भने।
जसमा माछा को कुनै पौडनु थैली छ?
जीवनको तल नजिकै हो कि यो अंग Parusnikova माछा, साथै प्रजातिका Deprived। वस्तुतः सबै deepwater व्यक्तिहरूलाई पनि पौडनु थैली बिना गर्छन्। कारण बोसो संग्रह र कम छैन आफ्नो क्षमता गर्न, विशेष - यो बिल्कुल buoyancy वैकल्पिक विधि द्वारा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ जब मामला छ। कायम स्थिरता अवस्था पनि केही माछा मा शरीर को कम घनत्व योगदान पुग्छ। तर त्यहाँ एक hydrostatic कार्यहरु कायम राख्ने अन्य सिद्धान्तहरू पनि छन्। यो कारणले गर्दा शरीर र पंख को सक्रिय हेरफेर गर्न विसर्जन को पर्याप्त गहिराई कायम गर्न बाध्य छ त उदाहरणका लागि, पौडनु थैली सार्क छैन, प्रदान गरिएको छ।
केही लागि, धेरै विद्वान को बीच समानताहरु आएको छैन मानव श्वसन अंगहरु र माछा थैली। यो विचार गर्नुपर्छ जो को सन्दर्भ र माछा को वर्तमान संरचना मा शरीर यी विकासवादी सम्बन्ध, ल्याउँछ। को पौडनु थैली माछा को सबै प्रजाति उपलब्ध छैन भन्ने तथ्यलाई, यो inconsistency गराउँछ। यो शरीर अनावश्यक छ भन्ने होइन, तर यसको atrophy र कमी को प्रक्रियाहरू यो भाग बिना को संभावना सुझाव। को पंख - केही अवस्थामा, माछा र hydrostatic आन्तरिक बोसो को नै समारोह र तल्लो निकायको घनत्व र अन्य लागि प्रयोग गरिन्छ।
Pechora सागर: सामान्य विवरण र स्थान
विस्तार मा प्लाज्मा झिल्ली को संरचना
पाठ र विषयहरु: को किंडरगार्टन वरिष्ठ समूहमा बोलीको विकास
Hymenoptera: वर्णन, प्रकार, मुख्य प्रतिनिधि र संरचना
प्लास्टिक पीवीसी Windows को हेरविचार
कसरी कार्लसन चरणमा आकर्षित गर्न। मास्टर वर्ग
के रहस्य मेन्थल चुरोट संग fraught छन्?
औषधि "बेलारुस": समीक्षा र पुस्तिका
Odyssee Resort4* (टुनिशिया, जर्बा): होटल, सेवा, को विवरण
कसरी एक समूह मा मेनु बनाउन 'सम्पर्क मा' जीवन्त र रोचक
Bitten भइरहेको के तिनीहरूले सांप डराउँछन् र कसरी जोगिन?
घरमा सबैभन्दा प्रभावकारी वजन
विश्लेषण Zhukovskogo "Svetlana" ballads। romanticism र sentimentality को संयोजन
200x200 काठ देखि परियोजना घर। सपना एक वास्तविकता कसरी बनाउने